अमेरिकामा ३७ वर्षीय पुरुषले जन्माए बच्चा, भन्छन्- आमा भनेर बोलाउँदा मन पि’रोल्छ – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / अमेरिकामा ३७ वर्षीय पुरुषले जन्माए बच्चा, भन्छन्- आमा भनेर बोलाउँदा मन पि’रोल्छ
admin December 28, 2021 अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 104 Views
मंकीपक्सकाे त्रा`स फैलिदाे क्रममा, फ्रान्समा नात्रै ५१ जना संक्रमित पुगे !
इटालीलाई हराएर अर्जेन्टिना च्याम्पियन
लस एन्जलस : अमेरिकाको लस एन्जलस नि’वासी एक पुरुषले छोरालाई जन्म दिएका छन् । ट्रान्स्जेन्डर पुरुष बेनेट कास्पर विलियमले एक स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिएका हुन् । रिपोर्टकाअनुसार ३७ वर्षीय विलियम एक ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन् । करिब ७ वर्षअघिसम्म महिला रहेका विलियमले सर्जरीमार्फत ब्रेस्ट हटाए र अन्य ट्रिटमेन्टमार्फत विलियमले पुरुषमा हुने हर्मोनहरु परिव’र्तन गराए ।
तर, मातृसुख लिन चाहेका विलिय’मले लिं,ग भने परिवर्तन गराएका थिएनन् । तिनै ट्रान्सजेन्डर पुरुष विलियमले सन् २०१७ मा मलिक नामक पुरुषसँग प्रेम सम्बन्धमा गाँसिए । लामो समयसम्म लिभिङ रिलेसनमा बसेको सो दम्पतीले सन्तान जन्माउने फैसला गरे । सो फैसलापछि विलिय’मले सन् २०२० अक्टोबरमा छोरालाई जन्म दिएको समाचार डेलिमेलमा छ।
आफ्ना छोराको नाम हडसन राखेका विलियमले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत नराम्रो अनुभूति सेयर गरेका छन् । छोरालाई जन्म दिएको एक वर्षपछि आफूले नर्स, विभिन्न छिमेकी र आफन्तबाट नराम्रो अनुभूति लिनुपरेको उनले बताएका छन् । ति व्यक्तिहरुले आफू’लाई पिता नभइ आमा भनेको भन्दै विलियमले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘अस्पतालमा हड’सनलाई जन्म दिँदा त्यहाँका नर्सहरुले पिताको सट्टा मलाई बच्चाको आमा भनेर बोलाउन थाले । यता छिमेकी र आफन्तहरुले पनि मलाई हडसनको पिता नभइ आमा नै भनेर बोलाउँछन् । अरुले यसरी बोलाउँदा मन पिरोल्छ, विलियमले भनेका छन्, ‘किनकी मातृत्व र नारित्वमा फरक हुन्छ । मातृत्वको भावना महिलासँग मात्र नभइ पुरुषसँग पनि हुन्छ ।’
Previous पिडित महिलाको बयान : एक्लै सुतिरहेको थिए अचानक तिन जना युवकहरु घर भित्र छिरेर मलाई ……
Next काठमाडौ कै यी ठाउँः जहाँ पुरुष खोज्न स्कुटरमा आउँछन् युवती !
वासिङटन । अमेरिकालगायत विश्वका धेरै स्थानमा गत साता थुप्रै व्यक्तिले आकासमा रहस्यमय प्रकाशपुन्ज देखेको दाबी …